Bài thơ một mình “gặm nhấm” nỗi cô đơn buồn thật buồn | Anybook.vn - Anybook
Bài thơ một mình “gặm nhấm” nỗi cô đơn buồn thật buồn | Anybook.vn
Tononkalo irery “mitokitsoka” ny manirery mampalahelo dia tena mampalahelo ny feon’ny fon’ny mpivady mifankatia. Tononkalo mirakitra alahelo lalina be ireny. Ao anatin’ny fitiavana dia tsy tokony hisy fahatsapana ho manirery irery fa tsy maintsy miara-mandeha hatrany amin’ny fandreseny ny fahasahiranana sy ny olana eo amin’ny fiainana.
Eto, Uct.edu.vn dia te-handefa tononkalo irery tsara indrindra, feno toe-po, maniry ny ho irery. Mba partageo mba hanamaivanana ny ahiahinao!
Ny tononkalo dia heverina ho sekretera mahatoky ao amin’ny fo. Tian’ny olona ny tononkalo satria afaka miaina izany ny olona. Ary ao anatin’izany dia afaka mahita fihetseham-po isan-karazany amin’ny fanahy poetika toy ny fanahin’olombelona. Anio no tiana haseho anao ny alahelon’ny manirery amin’ny alalan’ireo tononkalo manirery eto ambany.
Tononkalo: Vu Tham
Efitrano tokana tokana irery
Ny ranomaso mando no mitsoka ny rivotra
Mbola miandry ny fandrarahana dite manitra iray kapoaka
Omeo alina nostalgia ny sehatra taloha
Mitomany mangina ny masoko
Sosotra mangina ny volo lava
Manontany tena hoe nahoana ny olona no tsy mahita fotoana
Efitrano tokana tokana irery.
Mpanoratra: Phung Thieu Minh
Malahelo aho, malahelo, irery aho
Faly irery aho tamin’izay
Faly koa izahay
Irery isika dia malahelo sy sambatra irery
Izaho irery no aloka
Ao anatiny sy ivelany, ny alokako ihany
Tsy misy mamaly
Mipetraka sy miresaka amiko amin’ny tenako aho
Rehefa manirery dia mandeha irery
Teny an-dalana lavitra izay nandalo teo aloha
Soroka mangatsiaka mifangaro amin’ny alahelo
Rehefa tsy miraharaha ireo izay tia lalina
Rehefa manirery dia mitondra fanaintainana mangidy
Nanenina tampoka aho
Saingy lavitra izao ny fahasambarana
Araho ny rivotra sy ny rahona mankany amin’ny lanitra lavitra
Rehefa manirery aho dia lena ny molotro
Nahoana no tsy tapahanao ny tananao rehefa tezitra amin’ny tenanao ianao?
Rehefa very fo ianao vao ho fantatrao izany
Rehefa mandeha ny fotoana dia manenina mandrakizay ianao
Rehefa manirery aho dia leo miandry ny masoko
Saingy tara loatra, tsy milamina ny fo
Aiza no ahitako fahasambarana amin’ny volana Mey?
Rehefa mifangaro ao anaty rivotra sy zavona ny embryon rehetra
Rehefa manirery aho dia tsaroako io andro io
Izay nisy fitiavana taloha…
Aza miraharaha ny rivotra tolakandro
Manozongozona ny ravin’ny masoandro mavo
Manantena ny fararano ny olona
Sambatra taom-pifaliana feno lobaka Siamese
Ary ilay manidy ny varavarana sy manidy
Manonofy momba io andro io, taona inona no fantatrao?
Ny tolakandron’ny fararano dia nofonosina tamin’ny tangerines…
Mijery aloha ary mijere ao aoriana.
Malahelo aho, tokony hanontany tena aho
Anontanio hoe iza ilay olon-tiany
Aoka ho mangatsiaka mandrakizay aho
Toy ny orana miantso olona amin’ny fahavaratra
Fo mitomany mihaino
Toa nisy olona niaraka tamiko
Aza adino ny miandrandra ny fahasitranana
Sad lasopy mifoha irery
Omeo tsiny ny alina ho tsy nahy
Avelao aho hahita anao irery ao amin’ny nofiko
Niverina irery aho ny asabotsy tolakandro
Ny olona tsy hita dia hatsatra ny masoko
Ho an’ny lobaka fotsy tsy hita maso ny sabotsy tolakandro
Mifankatia izy ireo ary andrasany ny asabotsy tolakandro
Amin’ny filentehan’ny masoandro dia mifampitsimpona izy ireo
Ary matahotra ny sabotsy tolakandro aho
Miverina isaky ny oroka, tsy maintsy mandray ny fanirery aho
READ Chùm thơ về biển ngọt ngào, sâu lắng nhất | Anybook.vn
Mifidy ny manirery sy ny fahanginana aho
Mahaiza mitia ny tenanao rehefa mandalo ny tafio-drivotra.
Tonga saina tampoka,
Tsy misy tsy vita
Dia mampanantena fa handany hatramin’ny loha volafotsy.
Taorian’ny dia lavitra dia azoko ny halaliny sy ny sakany
Ephemeral ny zava-drehetra, tsy misy tsy manam-petra.
Na dia midadasika aza,
Te hihazona fiadanan-tsaina fotsiny
Mihirà hira fiderana ho an’ny fiainana.
Mpanoratra: Duong Len
Malahelo be aho fa te hitomany lava,
Mba hanadino ny alahelo rehetra
Fantatrao fa fitiavana adala izany.
Nahoana ny foko no mbola variana mitadidy.
Naniry hamarana imbetsaka aho,
Ny fitiavana ao am-po dia hadalana foana.
Fitiavana mandrakizay tsy fahombiazana mangirifiry.
Ary raiso indray ny fo marary.
Tena malahelo aho te hitomany.
Na iza na iza dia mbola teny mamy
Mbola raiki-pitia, mbola voasambotry ny fitiavana.
Noho izany dia misy firehetam-po be ao am-pon’ny mpanjaka
Misy afaka manampy ahy hanadino ny majika ve?
Atsaharo ny alahelo mba hampihenana ny faniriana.
Mba hanadino ato am-poko io fitiavana io.
Mba tsy halahelo sy halahelo ilay vahiny.
Na aiza na aiza misy anao dia manana ianao
Mbola feno ilay fitiavana manina
Firifiry ny olona mbola maniry ny hahatsiaro
Mandefa rivotra sy rahona ny hanitry ny ecstasy.
Eto amin’ity toerana ity aho, mitebiteby ny foko
Firy no manahy ny hahatsiaro ny lalana
Isan’alina miresaka amin’ny volana sy ny rivotra
Alefaso any amin’olona any ho any.
Fantatro izay miandry anao
Andron’ny nostalgia amin’ny nofy
Tolakandro manirery mandeha amin’ny arabe foana
Ho very fitiavana amin’ny tononkalo.
Afaka milaza amiko ve ianao hoe aiza ny efitranonao?
Reraky ny nostalgia sy ny fiandrasana
Ny fararano sy ny ririnina dia fanahy mangatsiaka
Feno fo ny tantara manokana.
Efa raiki-pitia, nahoana no miandry
Avelao ny fanahy hamoha ny andian-andro poetika
Andao hiara-hanatontosa ny nofinofy
Avelao aho tsy ho very hevitra.
Toerana mangina sy banga ny alina. Ao amin’io sehatra io, matetika ny olona no miaina miaraka amin’ny fihetseham-pony indrindra. Ary amin’ny fotoana toy izany dia miverina matetika ny fanirery. Ireto ny lahatsoratra tononkalo manirery amin`ny alina toe-tsaina alina. Andao hifampizara!
Mpanoratra: An Giang Bui
Mihodina ny alina hamoha ny foko
Mirenireny mandrakizay miaraka amin’ny fandehan’ny fotoana
Ny fahatsiarovana entinao mandritra ny alina
Azoko antoka fa matory aho izao.
Milatsaka ny volana fahavaratra ary mavo ny loha tanora
Rivotra mangina amin’ny lalana aolo amin’ny alina
Maizina toy ny tasy ranomainty ny alina
Toa haharitra mandrakizay izany.
Te-handefa hafatra aminao aho
Fa misalasala ny hamoha ny lohataona alina
Tsy miresaka manirery intsony izahay
Amin’ny maha-trio azy dia tsy nirehareha mihitsy.
READ "Đau Bụng" 99 Bài Thơ Chế Doremon Về Tình Yêu Hài Hước Nhất Năm | Anybook.vn
Na dia mahafinaritra aza ny any ivelany toy ny fety
Rehefa malahelo aho dia mitoera amiko…
alina manirery tsy misy olona lavitra
Fa ny fiadanan-tsaina rehefa lavitra ny olona matory.
Mifoha amin’ny misasak’alina misento
Very tao anatin’ny alina manirery lava be aho
Mangatsiaka ny rivotra any ivelany
Ny feon’ny manirery ihany no hitan’ny fontsika
Mahatsiaro ny silhouette amin’ny olon-tiana iray
Firy taona tsy misy anao ry malalako
Ao anaty nofy aho izao
Azonao ve ny foko?
Firy alina no mbola mahatsiaro ny fiambenana tsirairay
Ny ampahany nanisany ny hatsiakan’ny alina lava
Mbola tsaroan’ny foko ny andro nitiavako anao
Ny alina manirery mandry eo am-pandriana
Efitra manirery ao anaty nofinofy fitiavana
Tsy misy aloka ny anilako
Mbola irery aho amin’ny alina
Tsy misy mandry eo akaikiko
Sad fate lonely night school
Manirery ahy miaraka amin’ny tenako
Ny fitadiavana olona any dia lavitra
Mipetraha ary malahelo olona iray
Ny fitiavana mahavaky ranomaso ao am-po…
Ny andro izay mampanantena fa ho mavokely
Fa izao tafasaraka amin’ny fikorianan’ny fiainana
Nahoana no tsy mitady ahy ianareo?
Mitady toerana hiverenana ny volana fitiavana…
Hiverina any amin’ny ambanivoiny
Mifofofofo ny rano, fa henoy
Fantatrao izao ny tokony hatao?…
Ny lalan’ny voninkazo dia manenona ny faniriany manokana….
Omaly alina dia avy ny orana
Mitete tsikelikely amin’ny tany
Noheveriko fa bibidia ny dianao
Tongava mitsidika ahy amin’ny alina manorana
Mampalahelo tokoa ny orana alina be
Atsangano ny nostalgia ao am-ponao
irery aho, mangatsiaka
Ho mpitovo aho hatramin’izay
Omeo tsiny foana izay niala maimaika
Teny mamy fitiavana taloha
Nahoana ianao no tsy maintsy nanao veloma ny fitiavana?
Tsy mila manamarina ny tsiny
Mandehana amin’ny mangidy
Avelao ny volana rehetra
Hanala ny fahasambarana amin’ny tananao
Miezaha mitsiky amim-paharetana mba ho velona
Jereo hoe nahoana no manonofy ny fiainana
Fa iza no sahy miampita ny tetezana?
Mampalahelo ny manary ny voady
Manaova veloma ny fitiavana tanindrazana tamin’io andro io
Mivavaha amin’ny foko mba ho eo aminao
Na dia mikoriana aza ny rano sy ny vato,
Voasokitra ao am-po ny teny hoe ZANAK ho fiainana.
Mitomany amin’ny alin’ny fararano mangatsiaka
Tara alina momba ny aloka mandrakizay mampalahelo
Iza no mitondra ny fitiavana nofinofisintsika…!?
Nanenona ny fitiavana tamin’ny peratra volana…!
Ahoana no ho lasa fitiavana sy faniriana
Raiso ny nofinofy antoandron’ny sesitany
Mandefa fitiavana amin’olona
Manirery…mavokely tsy hita…!
Mpanoratra: Nguyen Tuoi
Manirery aho ao anatin’ny fiainana mitsingevana.
Malahelo aho eo afovoan’ny tsena be olona
Te hitomany aho fa tsy avelan’ny foko
Satria feno zavatra izao tontolo izao
Te-handeha aho fa tsy afa-mandeha ny tongotro
Te hieritreritra aho fa tsy avelan’ny saiko
Tsy maintsy nijanona tamin’ny tantara an’arivony
Voarakitra ao am-po ny alahelo
Nanomboka teo dia mihidy ny foko
Aza manantena sy malahelo na iza na iza
Miaina irery tsy misy ahiahy
Avelao hiala sasatra ny fanahintsika
Aoka tsy hamafy amin’ny hodi-maso ny alahelo
Aoka hilamina ny fiainana.
Izaho irery indray anio alina
Efitrano tsy misy ondana, fitiavana manirery
Manga ny lanitra, mitomany ny rahona
Mamela ny orana hilatsaka amin’ny tsipìka, ny ranomaso milatsaka
Ilay mitondra tsiky
Avelao ny olona halahelo sy hitomany ranomasom-pahoriana
Fantaro fa tsy handeha na aiza na aiza ianao
Nahoana ianao no mbola miandry fehezanteny? Niverina ianao!
Irery mba hahita ny fitiavana
Hifoha indray ve ianao rahampitso?
Mirenireny any amin’ny tontolo manirery aho
Mba hahitana izay very
Hanavao ny tsy azo atao
Indray andro…taiza ianao?
Mivezivezy foana ianao ary mamadika ny kintana
Miandrandra ny hahita endrika efa mahazatra indray
Hantsana maro, rivo-mahery, tafiotra
Oh, ny andro taloha…aiza ny lasa…?
Tsy mora ny mahita fitiavana ho an’ny tenanao. Na izany aza, ny miaina irery, irery nefa ao anatin’ny fiadanana, miaraka amin’ny fananana fitiavana izay fantatsika fa tsy ho aiza no tsara indrindra raha misafidy ny irery. Dia tsapantsika avy eo fa tsara ny mitokana.
Mpanoratra: Huu Anh
Amin’ny farany dia lasa daholo izany
Ny zava-drehetra manodidina ankehitriny dia tsy misy olona
Lasa izy ireo, tsy nisy nanao veloma
Tampoka teo dia mahatsiaro ho manirery aho.
Fa angamba ny irery no tsara kokoa
Satria efa toy izany taloha
Noho izany dia tsy mora ny manatona
Ianaro ny fomba hahafantarana olona eo akaikinao.
Misy andro te hirenireny fotsiny ny foko
Mandeha eny an-dalambe, mipetraka amin’ny andalana misy rano hafahafa
Manafatra dite misy gilasy
Mipetraka sy mitsoka, mijery ny fihazakazaky ny fiainana
Misy fotoana aho te-hijanona fotsiny
Avelao ny fahasahiranana rehetra, ny tombony sy ny fatiantoka
Malalaka ny tanàna fa mafy ny fon’ny vahoaka
Tsy misy manome ahy fiadanana
Misy fotoana aho mifoha mba hahita ny maraina
Dia lazao amin’ny tenanao hoe: Eny, tsy maninona ny irery
Sahirana amin’ny fiainana sahirana ny tsirairay
Tsy misy fotoana intsony, tsy maintsy mitia ny tenantsika isika
Mitsikia foana, manaova makiazy tsara tarehy
Ataovy loko mavokely ny molotrao ary mandehana moramora eny an-dalana
Samy hahita ny toerana halehany ny tsirairay
Aza tia olona noho ny fanirery
Mpanoratra: FITIAVANA amin’ny alalan’ny
Tsara kokoa noho ny nostalgia sy ny nenina mangidy
Tsy mahazo mamo ianareo roa
Andro sy andro mangidy kokoa.
Mila mandany tantely mamy
Tsy ilaina ny maniry vintana tsara
Ianao ihany no ato am-poko
Fa izao tapaka malemy fitiavana melancholy.
Ny fisainana ihany koa no zavatra voalohany
Eny, tsy maintsy manaiky ny fanaintainan’ny fitiavana aho
Ankehitriny dia tiako ny irery
Tsy misy fitiavana intsony, fibanjinana mangina ny fiainana.
Irery, mbola mifalifaly
Latsa-dranomaso izahay roa lahy.
Etsy ambony dia nozarainay taminareo ireo tononkalo miavaka indrindra hatramin’izay. Miaraka amin’ny dikany lalina, ireo tononkalo ireo dia toerana alehan’ny fo tsy milamina amin’ny fitiavana. Miaraha aminay hanaraka ireo lahatsoratra mahaliana indrindra!
Previous: [Moodboard là gì?] Bí quyết thổi bùng ý tưởng cho Designer | Anybook.vn
Next: Top 11 Trường Đào Tạo Ngành Xây Dựng ở TP.HCM Hiện Nay – Đề án 2020 | Anybook.vn